China 316L 316 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe rụpụta na ụlọ ọrụ | Huaxiao
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 316L 316 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe, 316 316L CRC
06317Ni12Mo2 0Cr17Ni12Mo2 S31600 SUS316 1.4401
316 igwe anaghị agba nchara eriri igwe akpọrepu eriri igwe Ngwa
Ihe ndi eji eme ya bu akwukwo na akwukwo, ndi na-ekpo oku, ndi na-agba agba, ndi na-eme ihe nkiri, paịpụ, ihe ndị dị na mpụga na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri. a na-ejikwa ya na ubi nke solenoid valves, housings, clamps, ball, valve body, oche, nut, stem na na.
316 igwe anaghị agba nchara ndị ọzọ
316 Iguzogide corrosion dị mma karịa 304 igwe anaghị agba nchara, na pulp na akwụkwọ mmepụta usoro nwere ezigbo corrosion eguzogide. Na igwe anaghị agba nchara 316 na-eguzogidekwa mbuze nke oke osimiri na ikuku dị egwu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
316 igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo ọxịdashọn na-eguzogide maka nkwụsịtụ na-aga n'ihu n'okpuru 871 ° C (1600 ° F) na iji ya na-aga n'ihu n'elu 927 ° C (1700 ° F). Ọ kacha mma ka ịghara iji 316 igwe anaghị agba nchara na nso nke 427 ° C-857 ° C (800 Celsius F-1575 ° F), ma igwe anaghị agba nchara nwere magburu onwe okpomọkụ na-eguzogide mgbe 316 igwe anaghị agba nchara na-nọgidere na-eji na mpụga a okpomọkụ nso. 316L igwe anaghị agba nchara carbide ọdịda mmiri arụmọrụ dị mma karịa 316 igwe anaghị agba nchara, dị na n'elu okpomọkụ nso.
A na-eme mkpuchi na okpomọkụ dị na nso 850-1050 Celsius C na-esote ngwa ngwa ngwa ngwa na-esote ngwa ngwa jụrụ. 316 igwe anaghị agba nchara-enweghị ike isi ike site okpomọkụ ọgwụgwọ.
316 igwe anaghị agba nchara ịgbado ọkụ Performance
316 igwe anaghị agba nchara na ezi ịgbado ọkụ arụmọrụ. Enwere ike iji usoro ịgbado ọkụ niile maka ịgbado ọkụ. Enwere ike iji ịgbado ọkụ dị ka nzube ahụ, dịka 316Cb, 316L ma ọ bụ 309Cb igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ ịgbado ọkụ. Iji nweta ihe kacha mma na-eguzogide corrosion, akụkụ nke welded nke 316 igwe anaghị agba nchara kwesịrị ka annealed mgbe ịgbado ọkụ. Ọ bụrụ na ejiri igwe anaghị agba nchara 316L, anaghị achọ mgbakwunye anakpo weld
Nke gara aga: 430 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Osote: 304DQ DDQ oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe
316 Igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Hot akpọre igwe anaghị agba nchara eriri igwe
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe Stock
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe Suppliers
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe tubing
Igwe anaghị agba nchara Pipe eriri igwe